Luluphi udidi lwamalaphu? Into ebizwa ngokuba lilaphu ibhekisa kwizinto zeshiti ezenziwe ngemicu yelaphu. Amalaphu ngokubanzi anokuhlelwa ngokwendlela yokusebenzisa kunye nemveliso. Ngokwenjongo f ...
Yintoni i-textile science?
Yintoni i-textile science? Njengesayensi yezobuchwephesha, izifundo ezilukiweyo zoomatshini (zomzimba, ezomatshini) kunye neendlela zeekhemikhali ezisetyenziswa kwindibano yefayibha nasekuqhubeni. Abantu baphile, kuqala ukutya, okwesibini banxibe. Ukususela mandulo ...
Zeziphi iintlobo zamalaphu ezisetyenziselwa ifanitshala? Ngokwamalaphu ahlukeneyo, ifanitshala eyonyuselweyo inokwahlulahlulwa ibe sisikhumba, isikhumba esingeyonyani, ilaphu, njl. Ilaphu lefenitshala eyonyuselweyo yesikhumba ...